Real Madrid iyo Manchester City ayaa ku biiray kooxaha iska xaadiriyay wareega Quarter-Finalka… – Hagaag.com
Real Madrid iyo Manchester City ayaa ku biiray kooxaha iska xaadiriyay wareega Quarter-Finalka…
Posted on 17 Maarso 2021 by Admin in Sports // 0 Comments
Real Madrid ayaa ku biirtay kooxaha u soo baxay wareega 8da ee Champions League ka dib markii ay 3-1 kaga badiyeen Atlanta Talaadadii lugta labaad ee tartanka.
Real ayaa u soo baxday quarter-finalka iyadoo labada kulan ku badisay 4-1.
Real Madrid ayaa guul adag ka soo gaadhay Atlanta oo ay ku garaacday garoonkeeda, iyadoo la og yahay in kooxda Talyaaniga ay ku dagaalantay inta badan waqtiga ciyaarta iyagoo 10 ciyaartoy oo keliya ah.
Kooxda Isbaanishka ayaa seddaxleyda u dhaliyey Karim Benzema (34), Sergio Ramos (60 rigoore) iyo Marco Asensio (85). Dhanka kale, Louis Muriel ayaa gool agoonka ah u dhaliyay Atlanta (83).
Dhanka kale, Manchester City ayaa sii wadata bilowgeedii cajiibka ahaa ee xilli ciyaareedkan waxayna u qalantay booskeedii wareega 8da Champions League, iyadoo Borussia Mochengladbach ku garaacday labo gool iyadoo aan wax jawaab ah laga bixin lugtii labaad ee finalka.
Manchester City ayaa go’aamisay ciyaarta goor hore, iyadoo xiddiga reer Belgium Kevin De Bruyne (13) iyo Ilkay Gundogan (18) ay dhaliyeen goolasha.
“Citizens” waxay u soo baxeen wareega Quarter finalka iyagoo ku soo baxay afar gool oo nadiif ah labada lugood.
Wareegii labaad ee ciyaarta ayaa lagu qabtay Puskas Arena oo ku taal caasimada Hungary ee Budapest, taas oo ah garoonkii lugtii hore lagu qabtay, xayiraadaha safarka iyo talaabooyinka taxaddarka leh ee la saaray Jarmalka sababo la xiriira faafida viruska Corona.